Ikhaya / Ikhishi Faucets / I-Pot Filler Faucets / WOWOW Embizeni Yokugcwalisa Isibhakela Phezulu Kwesitofu Ku-Nickel Ebhulashiwe
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 25 izilinganiso ikhasimende
(25 Izibuyekezo ikhasimende)
Ikhono elilula lokuhlanza lezinto zalo lokwenza ukuthi ibhodwe lokupheka ekhishini lokubhodla lilungele ukusetshenziswa kwenhlanzeko.
Yenziwe ngezinto zensimbi ezingenasici, isikulufu sokufudumeza ekhishini imelana kakhulu nokugqwala.
Isimbiza sobumba esihlanganiswe kabili sakhiwe kahle, ngakho-ke, akulula ukuqhekeka noma ukubukeka.
Umkhiqizo kulula ukuwusebenzisa ngaphandle komzamo omkhulu wokubamba.
2311100 imiyalo yokufaka
SKU: 2311100 Categories: Ikhishi Faucets, I-Pot Filler Faucets Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Ibhodlela lokugcwalisa, I-Wall Isekelwe
Sengike ngabona abanye laphaya ukuthola imali eningi kakhulu. Lokhu bekuyintengo enkulu, bengiyifakele ngokusemthethweni kepha oweplamba uvumile ukuthi yinani eliphakeme nekhwalithi enhle.
Lokhu sikuthengele ubhavu, njengoba besinamapayipi ahlukene angena odongeni esikhundleni sesikhala esijwayelekile sokuxuba.
Konke kwenziwa kahle. Isebenza ngokumangalisayo. Ukwakhiwa okunzima. Idizayini eqinile futhi enhle. Kwangathi zingahlala kuze kube phakade!
Ukubukeka okuhlanzekile futhi nohlelo lwe-valve oluphindiwe lwenza kahle ukugwema ama-drip ngemuva kokuthi seluvaliwe. Inkinga ngalokhu kugcwaliswa kwebhodwe ukuthi izingalo azilingani kokuthunyelwe ngakho kubukeka sengathi zintanta kancane. QAPHELA: Inkampani ibone ukubuyekezwa kwami ​​futhi yelula isandla yathi ngithole umkhiqizo onesici futhi yangithumela entsha kungekho mibuzo ebuziwe. Babeqinisile, okusha kubukeka kukuhle. Insizakalo enkulu yamakhasimende
Okumangazayo angikwazi ukukhuluma ngokwanele ngalesi sigcwalisi sebhodwe. Wonke umuntu ovakashela ikhaya lami uyalithanda. Inkonzo yamakhasimende ibiyinhle angikwazanga ukucela ukuphindiselwa kabusha kwensizakalo.
Thanda umklamo. Uzizwa eqinile. Bengizothenga eyodwa kwaDelta ekhaya iDepho kanjena kepha kubize cishe ama-400 amaRandi, ngakho-ke nginqume kulokhu ngemuva kokufunda izibuyekezo. Ngiyajabula ukuthi ngiyitholile, kodwa ngizothumela izithombe ngokuhamba kwesikhathi ngemuva kokufakwa kwe-WOWOW. Ukubukeka kwesimanje kakhulu futhi uyayithanda indlela ezizwa ngayo.
Ngeneliseke kakhulu ngalesi sigcwalisi sebhodwe. Uplumber wami uyifakile futhi isebenza kahle. Ngiyayithanda indlela ebukeka ngayo futhi intengo ibifanele kakhulu. Umthengisi ubelokhu ehlala kahle futhi ephendula imibuzo yami maqondana nomkhiqizo.
Ngiyayithanda le filler yebhodwe. Angikaze ngicabange ukuthi kungaba lula kangakanani ukuba nakho. Amanzi ageleza ngokushelela futhi awaze atshize. Nginembiza yami yekhofi eceleni kwesitofu sami futhi ingalo ifinyelela kahle ekugcwaliseni idamu.
Bekufanele ngithenge isarha lomgodi phezu kwethebula lami futhi ngenze okunye ngaphansi kokulungiswa kwekhawunta ukuze ngingene kulo. Izibambo azibekiwe ngendlela enembile. Umuntu kufanele acabange ngezikhundla zokuvula / zokucima izibambo ezimbili ukuze akuthole kahle ngaphakathi nangaphandle. Ngaphandle kwalokho ubuhle bemali.
Lokhu kugcwaliswa kwamabhodwe kwakungabizi, futhi kubukeka kukuhle futhi kusebenza kahle. Kungukuqedwa okumnyama kwamatte. Iyelula ize iyoshisa ngaphambili. Ihamba kalula futhi bekulula ukuyifaka. Inomfudlana omuhle wokugeleza kwamanzi.
Intengo enhle, isebenza njengokulindelekile. Qeda kubukeka kukuhle, ikhwalithi ehloniphekile. Okungenzeka uhole mahhala. Ngifisa ukuthi ize nezibambo ezimbili njengoba kwenza iningi kepha kukho konke engikuncomayo.
Isengezo esihle ekhishini lethu. Usonkontileka owenza lo msebenzi uwuthande kakhulu usezozifakela wona. Konke kuhle! Wonke umuntu wayecabanga ukuthi kuphole ngokuphelele.
Kwangihlaba umxhwele kakhulu ukufakwa kwekhwalithi nokulula. Kuhle kakhulu ekhishini lami lokuhweba. Ingasetshenziswa noma kuphi. Ngincoma ngokuqinisekile.
Simane silungisa ikhishi lethu futhi sengeza lokhu kugcwalisa amabhodwe amahle. Yakhiwe kahle futhi yakhuphuka kalula!
Thanda le ompompi. Isebenza kahle! Isibambi esivuliwe / esivaliwe sisebenza kahle ngokungadingi ukufinyelela esitofini esishisayo ukuvula.
Sisebenzise le ompompi endlini yethu yokugezela. Ukufaka kwakulula futhi kubukeka kukuhle!
Le ompompi inhle ngokuphelele futhi awukwazi ukushaya intengo! Bengikhathazekile ukuthi kuzoba buthakathaka kepha yenziwe kahle.
Ngosuku olulandelayo ngemuva kokuthola umkhiqizo, ngaqala ukufakwa kompompi wami wokugcwalisa ibhodwe. Inani letheyiphu yentambo ye-PTFE lanele. Ngemuva kokuqala kwehlulekile ukufaka ngenxa yetheyiphu eningi kakhulu, itheyiphu yentambo eseleyo ye-PTFE ibisanele ukufakwa kwami ​​kwesibili. Ngemuva kokuphothulwa kokufakwa, ngenze izivivinyo eziningi, futhi akukho ukuvuza kwamanzi okwenzekile!
Ukuthunyelwa bekushesha, futhi ngithole umkhiqizo ngosuku lwesithathu ngemuva kokuthenga. Ikhishi lami elisanda kulungiswa lifuna ukufaka umpompi. Ikhishi elingenawo ompompi alikwazi ukusebenza kahle ngokuphelele. Ngidinga ukufaka isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ebhodweni odongeni. Iteyipu esezingeni eliphezulu ye-PTFE yentambo ibaluleke kakhulu emsebenzini wokufaka. Ngenxa yekhwalithi esezingeni eliphezulu ye-PTFE yentambo enikezwe ngumthengisi. Inani likhulu kakhulu futhi lanele ukuthi ngilisebenzise izikhathi ezingama-2-3.
Le ompompi yokugcwalisa imbiza yenza ikhishi lami lisebenze kahle. Esikhathini esedlule, njalo ngangidinga ukuphatha imbiza esindayo yokuthola amanzi ngaphansi kompompi noma ukuthela amanzi ebhodweni nezinye iziqukathi. Lokhu kuyinkinga enesidina kakhulu. Lapho ngilungisa ikhishi lethu elisha, ngancenga ngempumelelo umyeni wami ukuthi afake ompompi bokugcwalisa ibhodwe. Umpompi wokugcwalisa ibhodwe le-Piper ngomunye wemizamo yethu futhi saneliseka kakhulu ngaleli ompompi. Yenziwe ngethusi ikakhulu, kanti ingaphezulu ungqimba lwe-matte black electroplated, olubukeka luhle kakhulu futhi luhle. Ngemuva kokuthi ifakiwe ekhishini, iba yinkanyezi yekhishi lethu. Njengoba siqashe ama-plumbers afanele ukuze afake, konke kuhambe kahle, futhi ipayipi lokugcwalisa ibhodlela le-wowow belisebenza kahle kakhulu kuze kube manje, ngiyalithanda!
Ibhokisi lomkhiqizo ongene likuvumela ukuthi lithunyelwe ngaphandle kokumakwa kwensimbi okuxubha ngensimbi. Ingxenye efakwe odongeni ibilula ngokwanele ukusukuma njengoba besigqolozele ukwakhiwa okusha. Angikwazi ukukhuluma ngokufaka odongeni olukhona. Umkhiqizo uze ne-allen wrench ukufaka i-coupler. I-woudl ibilokhu ingakholeki uma i-woudl ifake ne-teflon tape encane kepha noma yiliphi ibhokisi lamathuluzi elisebenza ngamapayipi asevele linayo. Incwajana kulula ukuyilandela. Hlola i-inthanethi ukubona ukuthi kufanele ufike kude kangakanani nodonga njengoba ufuna ukuthi likwazi ukugcwalisa izimbiza kodwa ngasikhathi sinye ungashayi i-microwave yakho ngaphezu kwebanga lakho.
Sisanda kufaka i-pot filler, wonke umuntu ubengabaza futhi abikezela ukuthi ngeke ngiyisebenzise nhlobo. Abalungile! Njengoba ukhula lokhu kugcwalisa imbiza kukusiza ukuthi ungathwali ibhodwe elinzima ngamanzi esitofini. Iningi labapheki noma noma ngubani opheka nsuku zonke uzokuthanda lokhu futhi uzokuthola kuwusizo. Ngiyayithanda idizayini nokuthinta. Ukukhathazeka enginakho kuphela lapho isitofu sivuliwe futhi ukugcwaliswa kwebhodwe kuphezu kokushisa, kungadala umonakalo? Kuze kube manje njengoba nginezishisi eziyi-6 ngizama ukungasebenzisi umshini wokushisa ongcono ngaphezulu kokugcwalisa ibhodwe. Kunconyiwe.
Okugcwele, okwenziwe kahle kakhulu ebhodweni. Awubonanga ikhwalithi ephezulu ngentengo. Ukufaka kuqonde kakhulu. Ngeke ngikwenze ngaphandle kweyodwa futhi. Into yayihlanganiswe kahle ngokwedlulele, futhi akukho ukuxegisa kuyunithi. Iqinile futhi ibushelelezi. Ukuphela kuphelele.
Lokhu kugcwaliswa kwamabhodwe kwenziwa kahle futhi kwenza ukwengeza okumangazayo ekhishini lami elisha. Uplumber wami ufake kalula i-pot filler. Kubonakala kuzinzile futhi kulula ukusetshenziswa kuzohlinzeka iminyaka yenjabulo emndenini wami.
Ukufakwa okulula, kubukeka kukuhle. Uzizwa uqinile futhi izilawuli zibushelelezi. Ngibe nayo kuphela isonto. Thanda kuze kube manje.
Vele ukuyifaka., Kubukeka kukuhle